Fahmee Kameradda Moodhadhka Liddiska
Muuqaal Muuqaal Fikradaha Vs. Farriin Digital
Isticmaalayaasha waxay jecel yihiin in ay wax kuu fududaan markaad soo iibsaneyso kamarad dijital ah , gaar ahaan iyadoo la muujinayo cabbiraadaha qaar ka mid ah noocyada, sida qiyaasta megapixel ee weyn iyo cabbirka weyn ee LCD.
Si kastaba ha noqotee, lambarrada noocaan ahi had iyo jeer ma sheegaan sheekada oo idil, gaar ahaan markaad eegto muraayadaha dhejiska ee kamarad dijital ah. Wax soosaarka ayaa qiyaasaya awoodda zoom-yada ee kaamirooyinka digital'ga ah ee laba qaab-dhismeed: Muuqaal-sahlan iyo saadaalinta digital-ka. Waa muhiim in la fahmo muraayadda zoom, sababtoo ah labada nooc ee zoomfiiq waa mid aad u kala duwan midba midka kale. Marka la eego dheelitirka muraayadda indhaha iyo zoom zoomka, hal kaliya - zoom zoom - waa si joogto ah waxtar u leh sawir qaadayaasha.
Iyada oo kamaradaha sawirada badankood, qolfaha zoom ayaa dibedda u baxa marka la isticmaalo, oo ka sii wadda jirka jirdhiska. Si kastaba ha ahaatee, kaamirooyinka digital-ka ah, si kastaba ha ahaatee, waxay abuuraan zoom-yada iyagoo hagaajinaya muraayadda oo kaliya gudaha jirka kamaradaa . Continue reading si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo kaa caawin kara inaad fahamto muraayadaha muraayadaha yaryar si fiican oo kaa caawin kara inaad dhamaystirto doodda zoom zoom-ka ah iyo zoom zoom-ka!
Muuqaal sawir leh ayaa cabbiraya kororka dhabta ah ee dhererka focal- ka ee muraayadda. Dhererka xudunta waa masaafada u dhexeysa bartamaha muraayada iyo dareeraha sawirka. Markaad muraayadda ka fogeyso sawirka muuqaalka gudaha gudaha jirdhiska, zoom ayaa kor u kacay sababtoo ah qayb yar oo ka mid ah goobta ayaa ku dhejisaa dareeraha sawir, taasoo keentay in koritaanka.
Markaad isticmaasho zoom-ka fudud, kamaradaha qaar digital'ka ah ayaa yeelan doona zoom zoom, taasoo macnaheedu tahay inaad joojin karto meel kasta oo ay ku jirto dhererka dhererka zoom for qayb ka mid ah zoom. Qaar ka mid ah kaamirooyinka digital-ka ah ayaa isticmaali doona meelo kala duwan oo ku yaal dhererka zoom-yada, badanaaba kaa yareynaya inta u dhexeysa afar iyo toddoba jagadood oo jajab ah.
Qiyaasta sawirka dijital ah ee sawirka digital-ka ah, si loo dhigo, waa mid aan qiimo lahayn inta lagu jiro duruufaha ugu badan. Saamaynta digital waa tiknoolaji halkaasoo kamaradaa uu sawirto sawir ka dibna dalxiiso oo uu sii waynaado si uu u abuuro sawir muuqaal oo muuqaal ah. Nidaamkani wuxuu u baahan yahay inuu weynaado ama ka saaro pixelska shakhsi ahaaneed, kaas oo keeni kara xumida tayada image.
Waqtiga ugu badan ee aad qaban karto farsamooyinka u dhigma duubista digital-ka ah ee sawir-qaadashada sawir-kambiyuutarka ka dib markaad sawirto. Haddii aadan haysan waqti ama aad u hesho barnaamijka wax-qabadka, waxaad isticmaali kartaa sawir-dhiska dijital ah si aad uhesho xallin sarreeya kadibna sameyso soo-saar ficil ah adoo ka saaraaya pixels iyo sawirada hoos u dhigaya xalka hoose ee weli la kulmaya daabacaaddaada baahi. Sida iska cad, faa'iido u lahaanshaha zoom zoom waa ku xaddidan duruufaha qaarkood.
Fahmidda Cabirka Sare
Markaad fiirinayso qiyaasaha kamarad dijital ah, qiyaasaha muuqaalka iyo muuqaalka dhijitaalka labadaba waxay ku qoran yihiin lambar iyo "X", sida 3X ama 10X. Tirada ka weyn waxay muujinaysaa karti xooggan oo xooggan.
Maskaxda ku hay in aan kamarad kasta oo kamarad ah "10X" oo aan sawir lahayn waa isku mid. Warshaduhu waxay cabbiraan dhejinta muuqaalida hal mar oo ka mid ah awoodda muraayadda ee kale. Si kale haddii loo dhigo, "falanqeeye" waa farqiga u dhexeeya qiyaasaha dhererka ugu yar iyo kan ugu weyn ee muraayada. Tusaale ahaan, haddii qalabka sawir-gacmeedka 10X ee sawirka dijitaalka ah uu leeyahay dherer dhererkiisu dhan yahay 35mm, kamaraduhu wuxuu lahaan doonaa 350mm dhererka xajmiga ugu sarreeya. Si kastaba ha ahaatee, haddii kamarad dijital ah ay bixiso qaar ka mid ah awoodaha balaadhan ee dheeraadka ah oo leh ugu yaraan 28mm oo isku mid ah, ka dibna zoom 10X zoom waxay yeelan doontaa kaliya dherer dhererka ugu sarreeya ee 280mm.
Dhaqdhaqaaqa farsamada waa in lagu qoro qaababka kamaradada, sida caadiga ah qaab la mid ah "35mm film u dhigma: 28mm-280mm." Inta badan, qiyaasta 50 mitir oo lens ah ayaa loo tixgeliyaa "caadi", Marka aad isku dayeyso inaad isbarbardhigto guud ahaan sawirrada muuqaalka ee muraayadda, waxaa muhiim ah in aad isbarbardhigto nambarada u dhiganta 35mm filimka lenska ilaa lenska. waxay noqon kartaa wax yar oo wareersan haddii aadan fiirineynin lambarka saxda ah.
Lansarbeegyada isbeddelka ah
Kaamirooyinka digitalka ah ee loogu talagalay dadka bilawga ah iyo dadka isticmaala dhexdhexaadka ah waxay caadi ahaan bixiyaan lensiga la dhisay. Si kastaba ha ahaatee, kamaradaha SLR (DSLR) badankood, si kastaba ha ahaatee, waxay isticmaali karaan lensarada laysku wada beddeli karo. Iyada oo DSLR ah, haddii lensigaaga koowaad uusan lahayn karti-ballaaran ama awood u eg oo aad rabto, waxaad iibsan kartaa muraayado dheeraad ah oo bixiya meelo badan oo xagal-wareeg ah ama doorasho ballaaran leh.
Kamaradaha DSLR ayaa ka qaalisan tayada mootada, waxayna inta badan ku wajahan yihiin sawirro dhexdhexaad ah ama sareeya.
Inta badan lenses DSLR kuma koobnaan doonaan lambarka "X" ee cabbirka sawirka. Taas bedelkeeda, dhererka xajmiga waxaa lagu qori doonaa oo keliya inta badan qeyb ka mid ah magaca muraayadda DSLR. DIL (kamaradaha is-beddelka digital-ka ah), kuwaas oo ah kamaradaha lens-ladaha laysku beddeli karo (ILC), sidoo kale waxay isticmaalaan muraayadaha ay ku taxan yihiin dhererkooda, halkii ay ka tiri lahaayeen lambarka X-zoom.
Iyadoo kamarad lens ah oo laysku beddelan karo, waxaad xisaabin kartaa qiyaasta sawir-maskaxeed ee muuqaalka adigoo isticmaalaya naqshad xisaabeed fudud. Qaado dhererka xajmiga ugu sarreeya ee leysku geyn karo leysku beddeli karo, sheeg 300mm, oo u qaybi dhererka xajmiga ugu yar, sheeg 50mm. Tusaalahan, qiyaasta sawir-celinta oo la mid ah waxay noqonaysaa 6X.
Qaar ka mid ah Muuqaalada Lens-ka ah
Inkasta oo la doorto kamarad-iyo-toogasho leh lens-ka horjoogsanaysa sawir-gacmeedyada waawayn ee loo yaqaan 'zoom optical zoom' waa mid la jecleysan karo sawirro badan, waxaa mararka qaarkood soo bandhigaa dhowr dhibcood oo yar.
Dumarka. Qaar ka mid ah heerarka bilawga ah, kamaradaha aan qaali ahayn waxay la dhibaatoodaan tayada hoose ee muuqaalka sababtoo ah buuqa marka leysku fidiyo awoodda ugu sarraysa ee wareegga. Buuqda kamaradaha sawir qaadayaasha ah ayaa ah miisaaniyad qalafsan oo aan si sax ah u qorin, inta badan waxay u muuqdaan inay yihiin geeso guduudan sawir.
Nadiifinta. Maaraynta ugu badnaan waxay mararka qaar keentaa foosha xun, taas oo ah dhalin-yaraansho meesha geesaha bidix iyo midigta ee muuqaalka sawirku u muuqdo. Laynka qadiimka ah ayaa u muuqda wax yar oo wareega dhexe ah. Mar labaad, dhibaatadani waxay caadi ahaan ku koobantahay heerarka bilawga ah, kaamirooyinka jaban oo leh muraayado dhejisyo waaweyn.
Waqtiga jawaab celinta gaaban. Markaad isticmaasho kor u qaadida kor u qaadista ugu sareeya, waqtiga jawaab celinta ayaa mararka qaar sii dara, taasoo keeni karta sawirro jilicsan. Waxaad sidoo kale seegi kartaa sawir aan caadi ahayn sababtoo ah jawaab celinta gaaban . Waxay si fudud u qaadataa kamarad digital ah muddo dheer si ay diiradda u saaraan image ee goobta ugu sarraysa, taas oo sharxaysa waqtiga jawaab celinta gaabis ah. Dhibaatooyinka noocan oo kale ah ayaa sii waynaanaya marka aad tooganeyso ugu yaraan qaylada hoose .
Wuxuu u baahan yahay safar. Isticmaalida qoondaynta dheer ee fog waxay sababi kartaa in la kordhiyo rikoodhada. Qaar ka mid ah kaamirooyinka digital-ka ah ayaa xalin kara dhibaatadan iyada oo loo marayo xasilinta muuqaalka . Waxa kale oo aad isticmaali kartaa tripod si aad uga hortagto sawirada sawirada laga bilaabo kamarad ruxin.
Dammaanadda & Doonidaada
Marka la tilmaamayo qaymaynta alaabteeda, qaar ka mid ah soo saarayaasha ayaa isku dari doona qiyaasaha dhejiska iyo qiyaasaha sawir-qaadashada, iyaga oo u oggolaanaya inay soo bandhigaan lambar tiro badan oo isku dhafan oo ku yaal sanduuqa hore.
Adiga, si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad eegto oo keliya lambarka qiyaasta maskaxda, oo laga yaabo in lagu qoro geeska ku yaal gadaasha sanduuqa, oo ay la socoto nambarada lambarrada kale ee faahfaahinta. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad raadiso raadin yar si aad u hesho cabbirida qiyaasta sawir-gacmeedka ee nooc gaar ah.
Marka laga hadlayo muraayadaha muraayadaha dhejiska sawir-gacmeedka, waxay bixinaysaa akhrinta daabacaadda ganaaxa. Fahmee sawirrada yaryar, waxaadna sameyn doontaa inta badan kamarad dijital ah oo aad iibsato.
Dhibaatooyinka Dhibaatooyinka kaararka microSD
Dhibaatooyinka Dhibaatooyinka Sony Sony
9 Siyaabaha Loo-qaabeynayo Android-kaaga
Sida Loo Adeegsado iPad-kaaga Facebook
Isticmaalka HTML5 si aad Video ugu muujiso daaqadaha hadda jira
SONY BDP-S790 3D Sawirada Disc Blu-ray Disc - Sawir Sawireed
Sida loo soo diri karo Group Fast Fast Group ee Email ah ee Mail
Dulmarka guud ee telefoonka gacanta
Dib u eegid Gmail - Adeegga Boostada ee Bilaash ah
Sida loo sameeyo saaxiibo xiddig ee "Sups Superstar"
Sida loo Xaqiijiyo Mfc110.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladka
Nelson Email Organizer Pro- Dib-u-eegis Dib-u-eegis ah
BlueStacks: Ku orda Android Apps PC
Hagahaaga Taageerida Socdaalka ee Yosemite Yosemite
SIP-ga bilaashka ah ee SIP-kumbuyuutarkaaga
Sidee loo isticmaalaa loona isticmaalaa 'Graphic Design'?
5 Codsiyada Muhiimka ah ee Wiiida
802.11b iyo 802.11g ma la mid yahay?
Sida Loo Beddelo Mawduucyada Xirfadaha ee GIMP 2.8